ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ယူကရိန်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားယူကရိန်းရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်မှု၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယအနေဖြင့်ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp ယူကရိန်းရှိ ort အစီအစဉ်များ၊ ယူကရိန်းတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကရိန်းတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ယူကရိန်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကရိန်းတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ယူကရိန်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ယူကရိန်းတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ယူကရိန်းတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ယူကရိန်းတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ယူကရိန်းတွင်ဒုတိယအကြိမ်ရွှေဗီဇာ၊ ယူကရိန်းတွင်ဒုတိယမြောက်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ယူကရိန်းတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာ၊ ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ယူကရိန်းတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 100,000
ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဥရောပပိုင်။ ယူကရိန်း၏ရှေ့တန်းစီးပွားရေးကိုဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ကြီးမားသောစီးပွားရေး၏အခြေခံအပိုင်းအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ထင်ကြေးများသိုလှောင်ထားမှုကိုပိုမိုကျိုးနွံသောကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနိမ့်နိမ့်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုလက်ခံစဉ်ယူကရိန်းသည်ခေတ်သစ်နှင့်အထူးသဖြင့်ဆိုဗီယက်စီးပွားရေး၏လယ်ယာမြေများတွင်အထွက်နှုန်းအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်ယူကရိန်းတွင်ရွေးချယ်မှုရှိခဲ့သည် ။ အမှန်တကယ်တွင်ယူကရိန်းမှငွေအမြောက်အမြားကိုညှိနှိုင်းပြီးယူအက်စ်မှပေးသောအများပြည်သူလစာ၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံအထိတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောရုရှားနှင့်ကာဇက်စတန်တို့၏ငွေကြေးတိုးတက်မှုအတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။
အိမ်နီးချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်ချွေတာသည်။ တ ဦး တည်းမြို့ထဲမှာ 1 Grevnah အဘို့အဘယ်နေရာမှာမဆိုခရီးသွားလာလိမ့်မည်! Grevnah သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ ၁ ပုံ ၁ ပုံမှသို့မဟုတ်တစ်ပြားမှ ၂၀ ကျပါသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်မီတာထိန်းချုပ်ထားသောရာသီဥတုပိုမိုသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုကိုယူလျှင်၎င်းသည် Grevnah ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်တစ်ပြားမှသာပမာဏရှိသည်။
ယူကရိန်းမှာယုံမှားဖွယ်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ရွှေတူးသူမဟုတ်ပါကယူကရိန်းတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဒီမှာအိမ်တစ်လုံးဝယ်ချင်ရင်၊ အခက်အခဲမရှိအိမ်မှာနေဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။
ယူအက်စ်ဒေါ်လာ၊ ဗြိတိသျှပေါင်၊ ရုရှားရူဘယ်နှင့်အခြားယူရိုအပါအ ၀ င်ငွေကြေးပုံစံအများစုကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအစက်အပြောက်များကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းနှစ်ခုကိုဤနေရာတွင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အတွက်ကုန်သွယ်ရေးအာရုံစိုက်မှုသည်ချက်ချင်းပွင့်လင်းလာသည်မဟုတ်။ ၎င်းတို့တွင်သြစတြေးလျဒေါ်လာနှင့်ဆွစ်ဖရန်စ်တို့ပါဝင်သည်။
ဘဏ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ဤနေရာတွင်များစွာမြင့်မားပါသည်။ အနီးအနားရှိငွေများအတွက် ၁၂.၅% ပေးဆောင်ရသောခိုင်မာသောခိုင်မာသည့်ဘဏ်များကိုရှာဖွေရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၁၇% အထိမြင့်မားသောအချို့သောအဆိုပြုချက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အားကိုးလောက်စရာမရှိပါ။ Raiffeisen (ဤတွင်အတူတူအလုပ်လုပ်သောသြစတြီးယားဘဏ်) နှင့် OTP (ဟန်ဂေရီဘဏ်) နှစ်ခုလုံးသည်ယူကရိန်းတွင်အလွန်အားကိုးပြီးထိရောက်စွာရရှိနိုင်ကြသည်။
မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများရှိနေရာအနှံ့အပြားတွင် ATM စက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ (သို့သော်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာမတွေ့ပါ။ )
မြို့ပြeverywhereရိယာများတွင်စူပါမားကက်အနည်းငယ်ရှိခြင်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောပိုမိုကျိုးနွံသောပွင့်လင်းသောစျေးကွက်များကဲ့သို့areaရိယာတစ်ခုစီနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ အဆိုပါအမျိုးအစားအကန့်အသတ်ရှိနေနိုင်သည်ဆိုသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်စတိုးဆိုင်များသည်များသောအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကောင်းသောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်ပိုကောင်းသောနေရာများဖြစ်သည်။
ယူကရိန်းတွင် (နေထိုင်သူများအတွက်) ဆေးကုသမှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုကြီးကြပ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆေးညွှန်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်နေရာရာသို့လက်လှမ်းမီသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအသုံးမပြုဘဲထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်ပြီးစွမ်းရည်ရှိသည်။
ဤနေရာတွင် (Dachias) မြေကိုဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀.၀၀ ဒေါ်လာအထိသာ ၀ ယ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တသမတ်တည်းနေထိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသောအမျိုးသားရေးအခြေအနေတွင် Dachia သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မြို့မှအစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Dachia တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးရေလည်ပတ်သောရေနှင့်စွမ်းအင်ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်သာများအတွက်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်သာရှိသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းတို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာစျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အများစုမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်တိုင်များနှင့်အမှန်ပင်နီးစပ်သည်။
စျေးဝယ်ခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခရီးသွားခြင်းကဲ့သို့သောပုံမှန်အရာများကိုကြီးကြပ်ရန်ရုရှားသို့မဟုတ်ယူကရိန်းတစ်မျိုး (သို့) အခြားတစ် ဦး နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ယူကရိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက် processing အချိန်
တရားဝင်ယူကရိန်း၏5နှစ်ပြီးနောက်
> ရေကြောင်း & သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး
အဘယ်ကြောင့်ယူကရိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားကြဖို့
ယူကရိန်းသည်ဥရောပကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်ဆက်သွယ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်အလွန်ကြွယ်ဝသောလယ်ယာမြေများရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးတင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ တိုင်းပြည်တွင်သံ၊ စွမ်းအင်၊ ဓာတုပစ္စည်းစသည့်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်။ တိုင်းပြည်တွင်အခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်ကြီးရှိသည်။ ယူကရိန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု၏နေရာဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏မြို့တော်သည်ကိယက်ဗ်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတဆင့်ယူကရိန်း၏နေထိုင် 1 လအတွင်းရရှိနိုင်သည်။
ယူကရိန်းတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသား၏မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အဖြစ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရန်ပထမအဆင့်မှာ D-Class ဗီဇာကိုပြည်ပရှိယူကရိန်းသံရုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်ရန်ဤဗီဇာကိုယူကရိန်းရှိမိသားစု ၀ င်များအားတရားဝင်ခွင့်ပြုရန်အသုံးပြုသည်။
Residency ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
ယူကရိန်းတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုခြင်းသည်တော်တော်လေးခက်ခဲသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းကိုရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပါမစ်ကိုအခြေခံသည်။ အလှည့်၌လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပါမစ်ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်ရယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ကိုကုမ္ပဏီအတွက်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသူသည်ပေါ်ထွက်လာသောစီးပွားရေးကဏ္theများတွင်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ယူကရိန်းရှိကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ ်၍ ပြည်ပသို့ရောင်းချနိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သင့်သည်။ ယူကရိန်းကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအရင်းအနှီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရန်ပညာရှိရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပြောင်းလဲနိုင်သောငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်သင့်ပြီး USD ၁၀၀၀၀၀ နှင့်ညီမျှသည်။ ပမာဏကိုဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားသင့်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိသောရန်ပုံငွေများသည်တရား ၀ င်ရင်းမြစ်မှဖြစ်သင့်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ယူကရိန်း၏စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုသင့်သည်။ လူနေမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မပါဝင်ပါ။
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ယူကရိန်းအဘို့ ယူကရိန်းရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုယူကရိန်းနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ယူကရိန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ယူကရိန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ယူကရိန်းမှ Golden Visa သို့နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ယူကရိန်းမှနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယူကရိန်းမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ယူကရိန်းသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ယူကရိန်းရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ၀ င်ရောက်လာသောနိုင်ငံသားအခြေပြုဖြေရှင်းမှုများနှင့်အလယ်တန်းနေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်း။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ယူကရိန်းအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ယူကရိန်းအတွက်၊ ယူကရိန်းအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ယူကရိန်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ယူကရိန်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ယူကရိန်းမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ယူကရိန်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ယူကရိန်းမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ယူကရိန်း Residency
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေမှ Residency သည်သင်၏အောင်မြင်သောယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုယူကရိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံရန် Diligence ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယူကရိန်းအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကူးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်စ်တယ်လ်ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာများကိုဖြည့်စွက်ရန်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုဆိုင်ရာယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုယူကရိန်း၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာအားအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ယူကရိန်းရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ယူကရိန်းမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ယူကရိန်းတွင်နည်းပညာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ယူကရိန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ယူကရိန်းရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ယူကရိန်းအဘို့ ယူကရိန်းရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ယူကရိန်းရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ယူကရိန်းအတွက်ကုန်သွယ်မှု၊ ယူကရိန်းတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောယူကရိန်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ယူကရိန်းအတွက်အထောက်အပံ့မရရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ယူကရိန်းအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ယူကရိန်းအဘို့ ယူကရိန်းရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ယူကရိန်း ယူကရိန်းရှိအပြာစာပေများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရှေ့ရပျ ယူကရိန်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ယူကရိန်းဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းယူကရိန်းရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်ငြင်းဆိုမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ယူကရိန်း၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ယူကရိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုယူကရိန်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်ယူကရိန်းကို dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ယူကရိန်းအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသောနေထိုင်မှုသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
ယူကရိန်းအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ယူကရိန်းအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်ယူကရိန်းအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များပါအသေးစိတ်ကိုဖြည့်ပါ။ ယူကရိန်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ယူကရိန်းအဘို့
ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ယူကရိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ယူကရိန်းအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူကရိန်းတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများက Residency အပြင်ယူကရိန်းတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ယူကရိန်းနှင့်အခြားနိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်အောင်ယူကရိန်းအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်မတွေ့ပါ။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ယူကရိန်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ယူကရိန်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ယူကရိန်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ )
ယူကရိန်းသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ယူကရိန်းရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ယူကရိန်းရှိကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်များနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ယူကရိန်းအတွက်အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် ယူကရိန်းအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ယူကရိန်းရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ယူကရိန်းကမင်းအစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင် ယူကရိန်းရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ရန် ယူကရိန်းမှာလက်ငင်းစတင်ဘို့။
ယူကရိန်းရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ယူကရိန်းရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ယူကရိန်း၌နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ယူကရိန်းအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ယူကရိန်းအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ယူကရိန်းအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ယူကရိန်းအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ယူကရိန်းရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ယူကရိန်းတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
ယူကရိန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ယူကရိန်း.
ယူကရိန်းတွင် Web ဒီဇိုင်း
ယူကရိန်းတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူကရိန်းအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ယူကရိန်းရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူကရိန်းအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ယူကရိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ယူကရိန်းတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ယူကရိန်းတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ယူကရိန်း၌နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ယူကရိန်းအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယူကရိန်းသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ယူကရိန်းသို့လာရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ယူကရိန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကယူကရိန်းပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ယူအက်စတန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုယူကရိန်း၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ယူကရိန်း၏နေထိုင်မှုကိုယူဆောင်လာခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူကရိန်း၌တည်၏။
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုလျှောက်ထားပါ။ ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ယူကရိန်းရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ယူကရိန်းအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ယူကရိန်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ယူကရိန်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ယူကရိန်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ယူကရိန်းအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများ ယူကရိန်းအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ယူကရိန်း၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောယူကရိန်းနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ ယူကရိန်းအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း ယူကရိန်းအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ယူကရိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ယူကရိန်းရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ယူကရိန်းအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ယူကရိန်းရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ယူကရိန်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ယူကရိန်းအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ယူကရိန်း၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ယူကရိန်း၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုယူနိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်ယူကရိန်းသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ယူကရိန်းအတွက်ထောက်ပံ့ထားသောရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။ ယူကရိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ယူကရိန်းရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ယူကရိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ယူကရိန်းရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ယူကရိန်းရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ယူကရိန်းအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ယူကရိန်းအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ယူကရိန်းရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ယူကရိန်းအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ယူကရိန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယူကရိန်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ယူကရိန်းရှိအေးဂျင့်များသည်ယူကရိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့မှုပေးပါသည်။
ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်ဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ညှိနှိုင်းတိုင်ခကိုသာယူဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှဥပမာ - အာရှမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ နီပေါမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အိန္ဒိယမှယူကရိန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှယူကရိန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ယူကရိန်းအဘို့
ယူကရိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ယူကရိန်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
လူ ဦး ရေအကာအကွယ်ပေးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ၀ န်ကြီးဌာနသည်ချာနိုဘိုင်းကပ်ဘေးများ၏အကျိုးဆက်များမှကာကွယ်ပေးသည်
ယူကရိန်း၏ Verkhovna Rada (ပါလီမန်)
တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ခန်းမအားကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ယူကရိန်း၏အလုပ်သမားနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ယူကရိန်းဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ထမ်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်ပုံစံ
link ကိုမှ ယူကရိန်း၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦး စီးဌာန ယူကရိန်းတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်